सुनको मुल्यमा यति धेरै गिरावट,सुन पसलहरु खचाखच कति पुग्यो आज तोलामा? – Khabar Chautari
सुनको मुल्यमा यति धेरै गिरावट,सुन पसलहरु खचाखच कति पुग्यो आज तोलामा?
प्रकाशित मिति: बिहिबार, पौष १६, २०७७ समय: १५:१२:१२
६ पुस, काठमाडौं । निरन्तर उकालो लागेको सुनको भाउ अघिल्लो दिनका तुलनामा आज सुनको मूल्यले १ सयले घटेको छ ।
बुधबार प्रतितोला ९४ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको छापावाल सुनको मूल्य बिहीबार प्रतितोला १ सयले घटेर ९४ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको छ । तेजावी सुन तोलाको ९३ हजार ६ सय रुपैयाँ रहेको छ ।
यस्तै, आज चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ । बिहीबार चाँदी प्रतितोलामा ५ रुपैयाँले घटेर एक हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको महासंघले जनाएको छ ।